पैसा कमाएर पनि बचाउन सक्नु भएकाे छैन? त्यसो भए यसो गर्नुस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पैसा कमाएर पनि बचाउन सक्नु भएकाे छैन? त्यसो भए यसो गर्नुस्
admin January 29, 2019 जीवनशैली 0
काठमाडौं । मानिसहरु पैसा जोगिएन भनेर चिन्तित् हुने गरेका छन् । यस समस्याबाट छुट्करा पाउन केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पैसा नजोगिने समस्या हटाउन ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको एक उपाय अपनाउन सकिन्छ । उक्त उपाय अवलम्बवन गरिए पैसा जोगिने दाबी गरिएको छ । तर, उपाय दैनिक ४१ दिनसम्म गर्नुपर्ने भएकाले झन्झट भने मान्नु हुँदैन । पैसा जोगाउने उपाय दिएको ज्यातिष शास्त्रका अनुसार पैसाको नोटको आवश्यकता पर्छ । जसलाई कुनै दिन रातो रंगको धागो बाँध्नुहोस् । त्यो नोटलाई घरको मन्दिर(पुजा गर्ने स्थान) मा राधाकृष्णको मुर्ति नजिक या मुर्तिको पछाडि राख्नुहोस् ।
पैसा राख्ने क्रममा राधाकृष्णसँग यो मनोकामनाको कामना गर्नुस् आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार आओस् र धन प्राप्त होस् । ज्योतिष शास्त्र त्यही राशिको नोटलाई पुरै ४१ दिनसम्म दोर्होयाउनुहोस् । अर्थात तपाइँले शुरुमा ५० को नोट राख्नु भएको छ भने अरु दिनमा पनि त्यतिनै रकममा धागो बाध्नुहोस् ।ध्यान दिनुहोस् कि ४१ दिनमा एक दिन पनि यस्तो काम गर्न तपाइँ छुट्नु वा झुकिनु हुँनेछैन । यो एक प्रकारको साधना हो । पूरै ४१ दिन नोट राख्ने र त्यही मनोकामना माग्नु आवश्यक पर्छ । तपाइँ एक दिन मात्र छुट्नु भयो भने यो साधना पूर्ण हुनेछैन ।
मानिसहरु पैसा जोगिएन भनेर चिन्तित् हुने गरेका छन् । यस समस्याबाट छुट्करा पाउन केही उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । पैसा नजोगिने समस्या हटाउन ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको एक उपाय अपनाउन सकिन्छ । उक्त उपाय अवलम्बवन गरिए पैसा जोगिने दाबी गरिएको छ । तर, उपाय दैनिक ४१ दिनसम्म गर्नुपर्ने भएकाले झन्झट भने मान्नु हुँदैन । पैसा जोगाउने उपाय दिएको ज्यातिष शास्त्रका अनुसार पैसाको नोटको आवश्यकता पर्छ । जसलाई कुनै दिन रातो रंगको धागो बाँध्नुहोस् । त्यो नोटलाई घरको मन्दिर(पुजा गर्ने स्थान) मा राधाकृष्णको मुर्ति नजिक या मुर्तिको पछाडि राख्नुहोस् ।
०७५ माघ १६ गते बुधबार ई. सं. २०१९ जनवरी ३० तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य!